कस्तो नानी जन्मायौ रिठ्ठा भन्दा कालो ?
छक्कु उदासी, जापान
त्यहि हिन्दी भाषामा शपथ ग्रहण लिएको प्रशंगले यो चेलीको चित्तमा गतिलो घाम लाग्न पनि सकेको छैन । म जस्ता अरु प्रवाशी नेपालीहरुको पनि पक्कै मेरो जस्तै गति भएको छ । आज मुलक नै बिरोधमय भएर तातेको छ । नतातोस पनि कसरी ? नेपाली जनताले बल्ल तल्ल रोइ धोई र कराई गरि दुई सय चालीस बर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्य गर्न के पाएका थिए फेरी यो नयां तन्त्र भित्रिन खोजेको महसुस भएको छ । नयां नेपालको सत्ता नयां चिन्ता गर्नु पर्ने घारी परमानन्द झाले निम्त्‍याएका छन् । नेपालीहरुको यस्तै नौतङकी पाराले अब पनि नयां नेपालको आशा गर्न बेक्कार हो जस्तो लाग्दै छ । ती उपराष्ट्रपती झाले नेपाल नै हिन्दी करण गर्न खोजेका हुन् की ? आफ्नो नेपाली पन र नेपाली मननै नभएका लाटो देशका गांडु तन्नेरी हुन् ? आफ्नो राष्ट्र भाषा र मातृभाषालाई लात मार्ने नयां अवतारी हुन् की ? कतै कसैको षडयन्त्र रुपी ईशरामा नाच्ने भिलेन हुन् ? यति बिधी के गर्न खोजेका हुन् ? कहिं नभएको जात्रा हांडी गाउंमै मच्चाउनु पर्ने ।
कन्ताको नेपाली भुमीमा नेपाली जनताले एतिहासकै पहिलो चोटी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाएका थिए, त्यहि पनि रुप रंग र गन्ध कांक्रो तर खांदा ऐरेलुको स्वाद साबित भएको छ भन्दा फरक नपर्ला । यसरी एकाएक बिरोधले ताप र प्रतापको रुप लिईरहेको बेला दुइ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बधाई ज्ञपानको लहर पनि त्यतिनै चलेको छ भने जापान लागएत अन्य देशहरुमा खुसीयालीको रुपमा जलपान र माध्यपान गरेका छन् । बिरोधकै क्रममा कति पुत्ला जले र भुत्ला उडे तर एक पटक एक शब्द पनि न भुल सुधार नै भएको छ न माफीनै मागिएको छ । काग गराउंदै छ पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तै भएको छ । के यो गतिलो संकेत हो ?
उपराष्ट्रपतिले हाड नभएको जिब्रो लरबराएकै बेला संजोग बस भानु जयन्ति परेको छ । नेपाली राष्ट्र भाषा, मातृभाषा र नेपाली साहित्यको प्रशंगलाई कोत्याउनु पर्दा देश बिदेशमा धमाधम भानु जयन्ति मनाईयो । तर राष्ट्र भाषा प्रेमी र साहित्य अनुरागीहरुले आफ्नो कर्तब्य भुसुक्कै बिर्सेको हो या मौन समर्थन । हिजो जापानमा पनि भानु जयन्ति मनाईयो । तर कसैले पनि न बुलन्दको ब नै निस्क्यो न अपमानको अ नै उच्चारण भयो । झन् जापानी साहित्य हाइकु को गहिराईमा दुबुल्की मारेको पो पाईयो । अस्तु